जनकपुर : साँझै बेपत्ता भएका आर्यनको घर नजिकै हत्या, हेटौडाबाट प्रहरीको 'डग टिम' आउँदै !
प्रशिक्षित कुकुरले हत्यारा वा घटनामा सँलग्नको कुनै सुराक दिने विश्वास गरिएको छ ।
२४ बैशाख, २०७६ || प्रकाशित १२:१२:००
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । सोमबार साँझ आफ्नै घरबाट बेपत्ता भएका बालकको शव मँगलबार विहानै आफ्नै घर नजिकै फेला परेको छ ।
सोमबार साँझ करिब ५ बजेदेखि नै आफ्नै दरबाजाबाट बेपत्ता भएका अढाई बर्षिय बालकको हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ । धनुषाको मिथिला नगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने स्थानीय शम्भु साहका अढाई बर्षिय छोरा आर्यन साह सामेबार साँझ बेपत्ता भएपछि खोजबिन तीब्र पारिएको थियो । बेपत्ता भएको १२ घण्टा नबित्दै बालकको हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता रामेश्वर कार्कीका अनुसार मंगलवार विहान ७ बजे तिर आफन्त बालकको लास आफ्नै घर नजिकको बगैचामा देखेपछि प्रहरीलाई खवर गरेको थियो । आर्यनको घाँटी रेटेर हत्या गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
धनुषा : घरबाटै अढाई बर्षिय बालक बेपत्ता
बेपत्ता भएको केही बेरसम्म नभेटाएपछि तत्कालै ईलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरमा जानकारी गराइएको थियो । जानकारी पाएलगत्तै राती ९ बजेसम्म प्रहरीले पनि आसपासको क्षेत्रमा सक्रिय रुपमा खोजतलास गरेको थियो । बालक अबेर रातीसम्म पनि नभेटाएपछि अपहरण भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएपनि विहानै घाँटी रेटेर हत्या गरिएको अवस्थामा मृत फेला परे आर्यन ।
आर्यनको धारिलो हतियारले घाँटी रेटेर हत्या गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीको नेतृत्वमा प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेका छन् भने घटना बारे अनुसन्धान तीव्र पारिएको जनाइएको छ ।
यता, घटनाबारे सशक्त एवम् सुक्ष्म अनुसन्धानको लागि हेटौडाबाट प्रशिक्षिक डग टिम (प्रहरीको कुकुर टोली) समेत आउन लागेको प्रवक्ता कार्कीले थपे । यस अघिको पनि विभिन्न घटनामा हेटौडाबाट डग टिम मगाइएको थियो । प्रशिक्षित कुकुरले हत्यारा वा घटनामा सँलग्नको कुनै सुराक दिने विश्वास गरिएको छ ।